५ कारणहरु हरेक ईसाईहरु लाई सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्छ प्रार्थना बिन्दुहरु
घर ईश्वरीय बैठक ५ कारणहरु हरेक ईसाईहरु लाई सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्छ
आज हामी5ईसाईहरु लाई सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्छ कारणहरु संग व्यवहार गरिनेछ। सुसमाचार प्रचार यो तरीका हो कि यो पुरानो हुन को लागी छैन। धेरै चर्चहरु को सन्देश मा पूंजीकरण छ समृद्धि कि विश्वास गर्नेहरु को रूप मा हाम्रो प्राथमिक कार्य को स्थान पूर्ववत छोडिएको छ। हामी एक चर्च को रूप मा र belivers को रूप मा प्राथमिक कार्य को हाम्रो ठाउँ मा फर्कन को लागी आवश्यक छ। ख्रीष्टको सन्देश संसारको सबैभन्दा गहिरो र पूर्ण भागमा फैलनु आवश्यक छ।
को पुस्तक मत्ती २:: १ -28 -२० यसकारण जानुहोस् र सबै राष्ट्रका चेला बनाउनुहोस्, उनीहरुलाई पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिनुहोस्, उनीहरुलाई सिकाउनुहोस् कि मैले तिमीहरुलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न सिकाउँछु; र हेर, म सधैं तिम्रो साथमा छु, युगको अन्त्य सम्म पनि। " जब येशू स्वर्ग मा उक्लनु भएको थियो येशूले दिनुभएको यो महान कमिशन थियो। उनले भने कि हामी संसार मा जानु पर्छ र सबै राष्ट्रहरु को शिष्यत्व बनाउनु पर्छ, उनीहरु पिता, छोरा र पवित्र आत्मा को नाम मा बप्तिस्मा लिनु पर्छ। यो ख्रीष्ट येशू द्वारा दिइएको महान आयोग थियो।
जे होस्, धेरै विश्वासीहरु र चर्चहरु यस आयोग बाट भटकिएका छन्। समृद्धिको उपदेशले सुसमाचार प्रचारलाई ओभरराइड गरेको छ। सुसमाचार प्रचार हाम्रो चर्च मा प्राथमिकता को रूप मा लिनु पर्छ। प्रत्येक चर्च र व्यक्ति सुसमाचार प्रचार गर्न र मानिसहरु सम्म पुग्नै पर्छ। मुक्ति होर्डिंग गर्न को लागी होइन, यो भर मा वितरित गर्नु पर्छ। ख्रीष्ट ती मानिसहरु को लागी आउनु भएन जो मुक्ति पाएका छन्, उनको मिशन मुक्ति नपाएकाहरुको लागी थियो।
हाम्रो चर्चहरु र सबै ईसाईहरु द्वारा सुसमाचार प्रचार लाई प्राथमिकता दिनु पर्ने कारणहरु के के हुन्? सबै ईसाईहरु लाई सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्छ पाँच कारणहरु लाई छिटो हाइलाइट गरौं।
यो ख्रीष्ट येशू द्वारा एक आज्ञा हो
मत्ती २:: १ -28 -२० यसकारण जानुहोस् र सबै राष्ट्रका चेला बनाउनुहोस्, उनीहरुलाई पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिनुहोस्, उनीहरुलाई सिकाउनुहोस् कि मैले तिमीहरुलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न सिकाउँछु; र हेर, म सधैं तिम्रो साथमा छु, युगको अन्त्य सम्म पनि। "
यो महान आयोग थियो कि ख्रीष्ट येशू द्वारा आज्ञा गरिएको थियो। उहाँले प्रेरितहरु र स्वर्ग मा उहाँको स्वर्गारोहण देखेका सबैलाई भन्नुभयो कि स्वर्ग र पृथ्वी मा सबै शक्ति उहाँलाई दिइएको छ, यसैले हामी सबै राष्ट्र मा जानु पर्छ र चेला बनाउनु पर्छ, हामीले उनीहरुलाई बुबा, छोरा र पवित्र आत्मा को नाम मा बप्तिस्मा दिनु पर्छ । र हामीले उनीहरुलाई सिकाउनु पर्छ सबै कुरा पालन गर्न को लागी उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ।
ख्रीष्टको मिशन उनको दुई बर्षको सेवकाईमा पूरा हुन सकेन, यसैले ख्रीष्टले उद्धार प्राप्त गर्नेहरुलाई विदेश जाने र अन्य मानिसहरुलाई सुसमाचार फैलाउन निर्देशन दिनुभयो। एउटा प्रमुख कारण हामी सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्छ किनभने यो एक आज्ञा हो जुन हामीलाई ख्रीष्ट येशू द्वारा दिइएको थियो। जब यो इभान्जेलिज्म को लागी आउँछ, हामी एक छनौट छैन, यो अनिवार्य छ, यो प्रत्येक विश्वासी को लागी अनिवार्य छ।
ख्रीष्टको मृत्युको कारण
जोन ३:१ of को पुस्तक मा धर्मशास्त्र भगवान को लागी संसार लाई यति माया गर्नु हुन्छ कि उहाँले आफ्नो एक मात्र पुत्र दिनुभयो कि जो कोहि उहाँ मा विश्वास गर्दछन् नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। ख्रीष्ट येशूको मिशन अल्पसंख्यक वा मानिसहरुको एक विशेष सेट को लागी मात्र होइन। यो एक सार्वभौमिक मिशन हो। उहाँ हरेक मानिसको लागी मर्नुभयो र उसको मृत्युले मानव जातिको लागी एउटा नयाँ करार खोल्यो।
संक्षेप मा, यो सुसमाचार विदेश मा फैलनु पर्छ। हरेक पुरुष र महिला लाई थाहा छ र यसको बारे मा सुन्नु पर्छ। हरेक गाउँ, हरेक बस्ती ख्रीष्ट को हो भन्ने बुझ्न आउनु पर्छ र उनीहरु येशू को माध्यम बाट अनन्त जीवन को वाचा मा जान सक्षम हुनु पर्छ। भगवान पापी को मृत्यु चाहनुहुन्न तर ख्रीष्ट येशू को माध्यम बाट पश्चाताप। तर मानिसहरु यो कसरी थाहा पाउनेछन्, जब उनीहरु येशूलाई चिन्दैनन्। यो बताउँछ किन सुसमाचार प्रचार बिश्वासीहरु को रूप मा हाम्रो लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
किनकि येशू बाटो, सत्य र प्रकाश हुनुहुन्छ
यूहन्ना १४: Jesus येशूले उहाँलाई भन्नुभयो, “बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। म बाट बाहेक कोहि पनि बाबाकहाँ आउँदैनन्।
हामी पृथ्वीमा कति बर्ष बिताउँछौं, बाहेकको जीवन धेरै लामो छ। यो बताउँछ कि किन एक मानिस यो सबै गर्नु पर्छ यो स्वर्ग मा एक स्थान सुरक्षित गर्न को लागी लिन्छ। यस बीचमा, हाम्रो कुनै पनि राम्रो कामले हामीलाई बाबाको राज्यमा स्थान कमाउन सक्दैन। धर्मशास्त्रले भन्यो कि येशू पिता को लागी एक मात्र बाटो हो, कोहि पनी ख्रीष्ट को माध्यम बाट बाप को लागी जान्छ।
जो कोहि उसको वा उसको नाम जीवन को किताब मा लेखिएको हुनु पर्छ कि ख्रीष्ट प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ स्वीकार गर्नुपर्छ। तब मात्र कुनै पनि मानिसले भगवानलाई देख्न सक्छ। ओनस हामी मा विश्वासकर्ता को रूप मा यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि अन्य मानिसहरु लाई यो सत्य थाहा छ त्यसैले उनीहरु लाई पनि बचाउन सकिन्छ।
हामी ख्रीष्टमा अझ राम्रो बन्छौं जब हामी इभान्जलाइज गर्छौं
जब हामी विश्वास गर्नेहरु को रूप मा प्रचार, हामी ख्रीष्ट मा बढ्छ। जति धेरै हामी ख्रीष्ट को हौं अरु मानिसहरु लाई देखाउन को लागी प्रयास गर्छौं, राम्रो समझ र प्रकाश हामी ख्रीष्ट को बारे मा पाउँछौं। ईसाई को रूप मा हाम्रो बृद्धि हामी कति आत्माहरु लाई स्वर्गीय रूपान्तरण मा निर्भर गर्दछ। हामी भगवान बाट एक गहिरो समझ र अन्तर्दृष्टि पाउँछौं जब हामी अन्य मानिसहरु लाई प्रचार गर्न को लागी बाहिर जान्छौं। र किनकि हामी ईश्वरको ब्यापार गर्दैछौं, बुबाले हाम्रो ब्यापारलाई पूर्ववत गर्न छोड्नुहुन्न।
किनकि हामी ख्रीष्टको आज्ञा अनुसार अरुलाई माया गर्छौं
मत्ती २२:३ Teacher शिक्षक, व्यवस्था मा महान आज्ञा कुन हो? ” येशूले उसलाई भन्नुभयो, "'तिमीले परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर।' ' यो पहिलो र महान आज्ञा हो।
किनकि ख्रीष्टले हामीलाई हाम्रा छिमेकीहरुलाई आफु जस्तै माया गर्न आज्ञा दिनुभयो। हामीले उनीहरुलाई ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ किनकि हामी उनीहरुलाई बचाउन चाहन्छौं। जसरी हामीले मुक्तिको मुक्त उपहार प्राप्त गरेका छौं, त्यसोभए हामी यसलाई अरुलाई स्वतन्त्र रूपले दिनु पर्छ। जब हामी मुक्ति पाउँछौं, त्यहाँ धेरै आत्माहरु हामीलाई बचाउन को लागी हेर्दै छन्, हामी उनीहरुलाई तल दिन्न बर्दाश्त गर्न सक्दैनौं। हामी सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, हामी सुसमाचार फैलाउनु पर्छ।
अघिल्लो लेखमा१० बाइबल पद माफी को लागी प्रार्थना गर्दा बिर्सनु हुदैन
अर्को लेखमा१० बाइबल पद तपाइँ बिर्सनुहुन्न जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ
२०२० मा व्यापारको सफलताको लागि Pray० प्रार्थना